News - Page - 31
‘बुलबुल’को दोस्रो टिजर सार्वजनिक, डेट जाँदै स्वस्तिमा र मुकुन !
पहिलो टिजरमा परिचय गरेका चलचित्रका मुख्य कलाकारहरु स्वस्तिमा खड्का र मुकुन भुषलले दोस्रो टिजरमा डेटिङको कुरा
‘सयकडा दश’ ट्रेलर सार्वजनिक
चलचित्र ‘सयकडा दश’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । आइतबार राजधानीमा आयोजित एका समारोहका बिच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो ।
चलचित्र ‘बोबी’को सिक्वेल बन्ने
चलचित्र ‘बोबी’को सिक्वेल बन्ने भएको छ । रियल पिपुल, रियल स्टोरी ‘बोबी’मा उमेश थापा र कविता गुरुङको प्रेम र संघर्षको कथा देखाइएको थियो ।
चलचित्र ‘अदालत’ को पोष्टर सार्वजनिक
प्रदर्शन मिति तय गर्दै चलचित्र ‘अदालत’ को पोष्टर सार्वजनिक गरिएको छ । दिनेश लिङ्देनको निर्देशन रहेको चलचित्र फागुन २४ गतेबाट प्रदर्शन आउने छ ।
चलचित्र ‘घर’ निर्माणको घोषणा
चलचित्र ‘घर’ निर्माणको घोषणा गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच हरर कथामा निर्माण हुने चलचित्रको घोषणा गरिएको हो ।
चलचित्र ‘जानी नजानी’को गीत सार्वजनिक
चलचित्र ‘जानी नजानी’को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको गीत सार्वजनिक गरेको हो ।
‘गोपी’ प्रचार : कविता लेखौं पुरस्कार जितौं
चलचित्र ‘गोपी’को प्रवर्दधन गर्न कविता प्रतियोगिता आह्वान गरिएको छ । निर्माण कम्पनी आरोही इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले नगद पुरस्कारसहितको कविता प्रतियोगिता
नेफ्टाको अध्यक्षमा पुष्कर लामा निर्विरोध, यस्तो छ कार्यसमिति
चलचित्र प्राविधिक संघ (नेफ्टा)को अध्यक्षमा पुष्कर लामा पुनः विजयी भएका छन् । यसअघि ३ बर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरिसकेका उनी
‘अनागत’को गीत सार्वजनिक, नायिका प्रियंका कार्की स्वर
चलचित्र ‘अनागत’को गीत सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको ‘हुदैछ के’ बोलको गीतमा अपर्ण थापा र प्रियंका कार्कीलाई फिचर्ड
मिसेस नेपाल टुरिजम २०१९ को खोजी सुरु
विभिन्न उमेर समुहको सौंन्दर्य प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको स्टार वन इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले विवाहित महिलाहरुलाई लक्षित गरेर मिसेस नेपाल टुरिजम २०१९ आयोजना गर्ने भएको छ ।
हेर्नुस् यस्तो छ ‘जय श्री दाम’को पहिलो १५ मिनेट
नेपाली चलचित्रको इतिहासमै सम्भवत पहिलो पटक होला चलचित्र ‘जय श्री दाम’ निर्माण युनिटले प्रदर्शन अगावै चलचित्रको पहिलो १५ मिनेट सार्वजनिक गरेको छ ।
दयाहाङ अभिनित ‘आप्पा’को गीत सार्वजनिक
चलचित्र ‘आप्पा’को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । आप्पाको ‘हावा सरर’ बोलको गीतमा मुख्य पात्र दयाहाङ राईलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
विरताको कथामा चलचित्र ‘रुमालै छ चिनो’
गोर्खाली सैनिकको विरताको कथामा निर्माण गरिएको चलचित्र एक्सन र लभस्टोरीको समिश्रण भएको बताइएको छ । कुनै समयको हिट लोक दोहोरी गीत रुमालै छ चिनोको नाम
‘गरुड पुराण’को ट्रेलर सार्वजनिक
चलचित्र ‘गरुड पुराण’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो ।
तराईको कथामा निखिलको भिलेन अवतार !
चलचित्र ‘भिलेन’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । तराईको परिवेशलाई देखाइएको चलचित्रको ट्रेलर एक्सनका दृष्यले भरिपूर्ण रहेको छ ।
चर्को विवादपछि दलित नेताले हेरे ‘प्रसाद’, विवाद गर्नुको अर्थ नभएको भनाई
चलचित्र ‘प्रसाद’ले दलित समुदायको अपमान गरेको भन्दै बिरोध भइरहदा दलित नेताहरुले भने चलचित्रमा आपत्तिजनक केही कुरा
चलचित्र ‘कोपिला’ को शुभ मुहुर्त
चलचित्र ‘कोपिला’ को शुभ मुहुर्त गरिएको छ । शिवम अधिकारीको लेखन तथा निर्देशनमा बन्ने चलचित्रको आइतबार चितवनको हाकिमचोकमा रहेको मालिका मन्दिरमा मुहुर्त गरिएको हो ।
चलचित्र ‘रणवीर’को गीत सार्वजनिक
चलचित्र ‘रणवीर’को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
चलचित्र ‘प्रेम संसार’को मुर्हत
चलचित्र ‘प्रेम संसार’ बन्ने भएको छ । चलचित्रको राजधानीको भद्रकाली मन्दिरमा पुजा गर्दै मुर्हत गरिएको हो । राम गौतमको निर्देशन रहने चलचित्र समाजिक प्रेम कथामा बन्ने
आमालाई सम्झेर भावविह्वल बनिन् जल शाह
अभिनेत्री जल शाह आफ्नी आमा तथा साहित्यकार स्वर्गीय प्रेमा शाहलाई सम्झिएर भावविह्वल भएकी छन् । पेमाको प्रथम स्मृती
चलचित्र ‘सयकडा दश’द्धारा पोस्टर सार्वजनिक
चलचित्र ‘सयकडा दश’को पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचार सन्देश बोकेको भनिएको चलचित्रको पोष्टरमा प्रायः सबै
‘द म्यान फ्रम काठमाडौं’ यसरी हुँदैछ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने प्रयास
उद्दिनले अन्र्तराष्ट्रिय बजारका लागि हलिउडका केही स्टुुडियोहरुसँग कुराकानी भइ चलचित्र पठाएको र स्टुडियोले पास गरेको खण्डमा
चलचित्र सृजना र व्यवसाय दुबै हो - माओत्से गुरुङ, चलचित्रकर्मी
रामबाबुसँगको सहकार्यमा माओत्से बजारमुखी बनेको आरोप पनि लाग्यो । उनले पनि ठट्यौली शैलीमा भनिदिए – ‘नुन तेलका लागि काम गरिरहेको छु ।’
कलाकार विजय लामा निगम प्रवक्तामा नियुक्त
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमका बरिष्ठ क्याप्टेन विजय लामा निगमको प्रवक्तामा नियुक्त भएका छन् । लामा कलाकार समेत हुन ।
चलचित्र ‘गोपी’को ट्रेलर सार्वजनिक
चलचित्र ‘गोपी’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । गाईपालनमा संलग्न एक युवाको कथालाई
चलचित्र ‘न यता न उता’को ट्रेलर सार्वजनिक
चलचित्र ‘न यता न उता’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानमिा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक
‘लभ स्टेशन’ चैत १ मा प्रदर्शन हुने
चलचित्र ‘लभ स्टेशन’ को प्रदर्शन मिति तय गरिएको छ । यो चलचित्र चैत १ बाट प्रदर्शनमा आउने पक्का भएको हो । उज्वल घिमिरेको निर्देशन रहेको चलचित्रमा प्रदीप खड्का
प्रदर्शन मिति तय गर्दै ‘दयारानी’ को पोष्टर सार्वजनिक
चलचित्र ‘दयारानी’ को फस्टुलक पोष्टर सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ । २०७६ साल जेठ १० गतेलाई प्रदर्शन
अनमोलको बोलिको मुल्य के ?
अनमोल बोल्नै नमिल्ने वा उनको कुरा कसैले नसुन्ने भन्ने हुँदै होइन । उनले आफुले कोसिस गरेको तर त्यसमा असफल भएको स्वीकारेका पनि छन् । ल ठिकै छ ए मेरो हजुर ३ मा उनको कुरा सुनिएन, होम प्रोडक्सनमा त उनको कुरा सुनिन्छ होला नी ?
चलचित्र ‘अनागत’ को टिजर सार्वजनिक
चलचित्र ‘अनागत’ को टिजर सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ । माघ ११ लाई प्रदर्शन मिति तोकिएको छ । साम्तेन भुटियाको निर्देशनमा बनेको चलचित्र सस्पेन्स थ्रिलर
प्रदर्शन मिती तय गर्दै ‘कागजपत्र’को पोस्टर सार्वजनिक
प्रदर्शन मिती तय गर्दै चलचित्र ‘कागजपत्र’को पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक पोस्टरमा मुख्य कलाकार नाजिर हुसेन
स्पोर्टस् जनरा बिगतमा पुरै असफल : सफल होला त ‘क्याप्टेन’ !
नेपालमा स्पोर्टस् जनरामा खासै चलचित्र बनेका छैनन् । बनेका एकाध चलचित्रले पनि खेलप्रेमीको मन जित्न सकेका छैनन् । यस्ता चलचित्रलाई न त खेलप्रेमीले आत्मसाथ गर्न सके, न त खेलाडीले नै गर्व गर्न सके ।
चलचित्र आरोपको गीत ‘ए मन’ सार्वजनिक
सञ्चिता लुईटेल र किशोर खतिवडाको मुख्य भुमिका रहेको चलचित्र आरोपको गीत ‘ए मन’ सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गीतमा नित्याशिवा र प्रह्लाद तिमिल्सिनाको स्वर
चलचित्र ‘मदहोस’को गीत ‘माछी जालैमा’ सार्वजनिक
चलचित्र ‘मदहोस’को ‘माछी जालैमा’ बोलको गीतको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक भिडियोमा एस.के. अधिकारीको
सेड्रिना अभिनित भिडियो ‘मेरी आमा’ सार्वजनिक
म्युजिक भिडियो मनोरञ्जनका लागि मात्र नभएर सामाजिक न्यायमा पनि केन्द्रित हुन सक्छन् भनेर सोही अनुरुप यसको कथा बुनिएको
बैशाखी टेकेर दर्शक भेट्न हल पुगे बिपिन
चलचित्र ‘प्रसाद’का प्रति चलचित्रकर्मी, समिक्षक अनि आम दर्शक सबैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहदा सबैभन्दा बढी प्रसंसा बटुल्ने कलाकार हुन विपिन कार्की । प्रसादमा निभाएको पात्रमा उनले प्राण भरिदिएका छन् । जीवन्त अभिनय गरेका छन् ।
‘क्याप्टेन’सँगै फागुन १७ मा ‘दि ब्रेकअप’
चलचित्र ‘दि ब्रेकअप’को प्रदर्शन मिति परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि पुस २७ लाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरेको भए पनि प्राबिधिक कारण देखाउँदै फागुन १७ लाई नयाँ मिति घोषणा
विक्रमको पहिलो गीत ‘प्रसाद’को ‘क्यारी बाचम्ला’ सार्वजनिक
दोस्रो सातामा पनि उत्साहजनक व्यापार गरिरहेको चलचित्र ‘प्रसाद’को तेस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल आइडलका
अमेरिकामा ‘न्यू इयर वीथ कालिप्रसाद बास्कोटा’
अमेरिकाको टेक्सास स्थित अष्टिनमा गायक तथा संगीतकार कालि प्रसाद बास्कोटाको सांगीतिक कार्यक्रम हुने भएको छ । अंग्रेजी नयाँ
चलचित्र ‘बुलबुल’को टिजर सार्वजनिक
चलचित्र ‘बुलबुल’को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । भिडियो साझेदारी युट्युव मार्फत आइतबार टिजर सार्वजनिक गरिएको हो । टिजरमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खडकालाई टेम्पो चालक
चलचित्र ‘प्रेमलीला’को गीत ‘मिस गरेँ’ सार्वजनिक
चलचित्र ‘प्रेमलीला’को दोश्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । भिडियो साझेदारी सञ्जाल युट्युब मार्फत आइतबार चलचित्रमा समावेश ‘मिस गरेँ’
चलचित्र ‘शुभलभ’को पोस्टर सार्वजनिक
चलचित्र ‘शुभलभ’को पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक पोस्टरमा चलचित्रका दुई मुख्य पात्र हरिहर अधिकारी र कृष्टिन पौडेललाई प्रस्तुत गरिएको छ । युवा ज्योतिषी हरिहर अधिकारी
पहिलो सातामा ‘प्रसाद’को व्यापार २ करोड बढी, दोस्रो सातामा पनि पकड कायमै
चलचित्र ‘प्रसाद’ले दोस्रो सातामा पनि मल्टिप्लेक्स सहित देशभरका चलचित्र हलहरुमा आफ्नो पकड कायमै राखेको छ ।
फ्राइडे रिलिज ‘सुश्री सम्पत्ति’, ‘डोली’ र ‘कथा ७२’
शुक्रबारबाट तीन चलचित्र ‘सुश्री सम्पत्ति’, ‘डोली’ र ‘कथा ७२’ प्रदर्शनमा आएका छन् । चलचित्र ‘सुश्री सम्पत्ति’लाई सुव्रत आचार्यले निर्देशन
प्रदर्शन मिति तय गर्दै ‘जीवन काडा कि फूल’को पोष्टर सार्वजनिक
मदन पुरस्कार बिजेता साहित्यकार झमक घिमिरेको जीवनीमा आधारित चलचित्र ‘जीवन काडा कि फूल’ चैत २२ देखि प्रदर्शनमा आउने
चलचित्र ‘क्याप्टेन’ को गीत सार्वजनिक, फुटबलर बन्न अनमोलले लिए ३ महिना ट्रेनिङ
चलचित्र ‘क्याप्टेन’ को गीत सार्वजनिक गरिएको छ । बिहिबार राजधानीमा आयोजित एक
चलचित्र ‘चौका दाउ’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक गरिएको दुई
चलचित्र ‘गोपी’को पोष्टर सार्वजनिक
विपिन कार्कीको अभिनय रहेको चलचित्र गोपीको पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । चारवटा पोस्टरमध्ये सबैमा विपिनको उपस्थिति छ । एउटा पोस्टरमा मात्र फिल्मका दुई अभिनेत्री
विनोद र मेरो बिचमा खतरै प्रतिष्पर्धा चल्यो – सलोन बस्नेत
बालकलाकारका रुपमा सलोन बस्नेत जति सफल थिए नायकको रुपमा सायदै त्यही सफलता मिलेको छ । हुन त नायकका रुपमा पहिलो चलचित्र होस्टेलबाट नै सलोनको तारिफ नभएको भने होइन । यद्यपी सोलो नायकका रुपमा उनले काम गरेका चलचित्रले बक्स
प्रदर्शन मिती तय गर्दै ‘आप्पा’को पोस्टर सार्वजनिक
जेष्ठ २४ गतेलाई प्रदर्शन मिती फाइनल गर्दै चलचित्र ‘आप्पा’को पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच
Results 1762: You are at page 31 of 36